Zavatra 5 tsy fantatrao momba an'i Santino Marella - Wwe
Zavatra 5 tsy fantatrao momba an'i Santino Marella
12 taona izay no lasa taorian'ny nifidianan'ny Vince McMahon tanana an'i Santino Marella avy tao anaty vahoaka tao Milan, Italia hanohitra ny tompon-daka amin'ny Intercontinental Umaga. Nahazo fandresena nahasosotra i Marella ary ny Tompondaka Iraisam-pirenena niady tamin'ny iray amin'ireo sahirana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny tolona.
Marella dia hanohy hanana hazakazaka WWE naharitra fito taona nahitako azy niaraka tamin'i Maria Kanellis sy i Beth Phoenix. Nanjary fanta-daza tamin'ny fahaizany mampihomehy izy ary nanolotra fotoana slapstick nandritra ny folo taona ho an'ireo mpankafy tolona manerana an'izao tontolo izao. Anisan'izany ny fihazakazahany ho Santina Marella, 'rahavavy kambana' lahy, izay matetika tsy nahomby tamin'ny fifaninanana vehivavy. Ireo mpankafy fikomiana dia mety hahatadidy ihany koa ny famongorana azy tsy ho adino 'Tsy vonona' aho tamin'ny Royal Rumble 2009, ary koa ny finany farany: The Cobra.
Ho porofon'ny fahaizany amin'ny maha mpilalao azy dia fantatry ny ankamaroany fa i Marella irery no toetrany WWE mahazatra, saingy misy zavatra betsaka kokoa momba an'i The Milan Miracle noho ny fiheverana diso farany ny andian-teny mahazatra toy ny 'Can of whip whip.'
Vao haingana i Marella no nitafa tamin'i Lilian Garcia taminy Manenjika Voninahitra podcast ary nisokatra tsy mbola nisy toy izany. Miomàna hihomehy ary hianatra ny momba an'i Santino Marella amin'ity andiany farany an'ny Zavatra 5 tsy fantatrao .
# 5. Tsy nanana ego i Marella & izay nanampy azy hisongadina
Santino - Cobra!
Santino Marella dia hafa noho ny maro amin'ireo mpihetsiketsika manodidina azy. Nitazona ny fomba fijery izy ary nankasitraka hatrany izay vitany.
I Marella koa dia nandà ny hino ny iray amin'ireo fieboeboany manokana ary tsy ho tratry ny fitiavany tena.
Hoy izy Manenjika Voninahitra mpampiantrano Lilian Garcia,
'Iray amin'ireo zavatra nampiavaka ahy io. Tsy iray tamin'ireo tovolahy nanana ego goavambe aho ary mieritreritra aho fa mamelombelona ny olona sasany - toa ny ankamaroan'ny tovolahy, tiako ny vadin'izy ireo na tiako ny renibeny satria samy manao ratsy an'io macho io daholo. ass cool bandy ary tsy manandrana manao an'io akory ity rangahy ity. Fahafinaretana sy hadalana fotsiny no ataony. Heveriko fa izany no nampiavaka ahy. '
Na dia maro aza ireo mpihetsiketsika no tsy te hiditra amin'ny hatsikana mampihetsi-tena, ny fahaizan'i Marella manala baraka ny tenany dia nanampy azy hisongadina ho toetra amam-panahy.
Rehefa nitoloko ireo mpihetsiketsika hafa ary nitaraina fa tsy afa-manoatra, dia nitazona ny masony i Marella,
'Nisy tovolahy tany ambadiky ny sehatra izay tsy faly tamin'ny naha-lehilahy ambony azy na inona na inona. Hoy aho hoe: 'Zoky a, mpiady matihanina izahay mba hivelomana. Tsara daholo rangahy. Tsara daholo. '
Jake Paul dia voalaza fa nitondra sarety golf namakivaky ny toerana fanatodinana sokatra tany Puerto Rico, niteraka hatezerana
Ny zanakalahin'i Ted DiBiase dia niaiky ny heloka noho ny fisolokiana tamin'ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fanjakana
Ahoana no hanovana ny fiainanao ho tsara kokoa: Ireo làlana 2 ihany no azonao raisina
'Raha vao miala ianao dia miala' - Tompondakan'ny WWE teo aloha dia tsy niresaka tamin'i Vince McMahon nandritra ny taona maro
Firy ny zaza ananan'i Rosie O'Donnell? Ny momba ny fianakaviany rehetra rehefa mizara sary tsy fahita amin'ny zanany lahy, Blake
'Nibanjina ny masoko aho': Valkyrae dia nihetsika tamin'ny Disguised Toast miaro azy amin'ny fankahalana an-tserasera, satria manafoana ny tantara an-tsehatra
Taratasy misokatra ho an'ireo izay tsy manana ambasitra, tsy misy tanjona, ary tsy misy nofy
kelly clarkson vady net net
chip ahazoana harato mendrika 2017
inona no atao hoe fiantsoana anarana amin'ny fifandraisana
Jason momoa sy lisa bonet
olona mirehareha amin'izay ananany